NGO Forum - Nepal - हैजाको रोकथाम 'फिल्टर होइन उमालेको पानी' NGO Forum - Nepal - हैजाको रोकथाम 'फिल्टर होइन उमालेको पानी'
गर्मी मौसममा हैजा संक्रमणको सम्भावना बढी हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यसपालिको गर्मी सुरुवातपछि दुई साताअघि गरिएको पहिलो प्रयोगशाला परीक्षणमा प्रमाणित हैजाका चार रोगी काठमाडौंमा देखिएका छन् । अहिले दुई जना हैजाका रोगी शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार गराइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । हैजा देखिएका चार जना जमल र कलंकीका हुन् । 'फिल्टर मात्रै गरेर पिउने पानीले हैजा हुने सम्भावना बढी हुन्छ । चिकित्सकीय इतिहासले हैजा रोगीले फिल्टर गरेको पानी पिएको देखाउँछ', अस्पतालका डा. राजेश साहले भने, 'हामीले हालको हकमा पाँच मिनेटसम्म उमालेर सफा भाँडोमा चिसो गरेर राखेको पानी मात्र सेवन गर्न सल्लाह दिएका छौं ।' उनले हाल बजारमा पाइने बोतलबन्द पानी वा मिनरल वाटरसमेत रोगजनक कीटाणुबाट मुक्त नरहेको अवस्थालाई आंैल्याउँदै भने, 'नास्टको केही अघि गरिएको अनुसन्धानले समेत बजारमा पाइने धैरैजसो 'बोतल वाटर' मा हैजा लगायतका रोगजनक कीटाणु रहेको देखिएको कुरा बिर्सनु हुन्न ।' हाल कीटाणु देखिएका रोगीहरूमा '०१ ओगावा', प्रजातिको हैजाको जीवाणु पाइएको उल्लेख गर्दै टेकु अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनले भने, 'मुख्यतः प्रदूषित खाना र पानीले हैजा सर्ने देखिए पनि हामीकहाँ प्रदूषित पानी नै यो संक्रमणको मुख्य कारण भने हुन्छ ।'
गर्मीयामदेखि नै हैजा देखिन थाले पनि मनसुनको समय यो रोगको सबैभन्दा बढी प्रकोप देखिन्छ । डा. पुनका अनुसार यसबाट बाँच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय बाह्य, प्रदूषित खाद्यपदार्थ र पानी बाट टाढा रहनु हो । यो समय खानेपानी, खुला कुवा र हेन्ड पम्पको पानीसमेत उमालेर खानुपर्छ । पानीलाई क्लोरिन लगायतका रसायनले शुद्घीकरण गर्दा विशेषज्ञको सल्लाहअनुसार उनीहरूले बताएको प्रक्रिया अपनाएर समुचित उपयोग गर्नसमेत उनले सल्लाह दिए । उपत्यकामा एक दशकदेखि हैजा नियमितरूपमा बर्सेनि हैजाको संक्रमणलाई औंल्याउँदै डा. पुनले भने, 'खानेपानी, हाम्रो बानी व्यहोरा र सरसफाइको स्तरमा वृद्घी नगरिए उपत्यकामा हैजा निरन्तरदेखि नै राखिनेछ ।' डब्लूएचओका अनुसार बर्सेनि २२ लाख व्यक्तिको मृत्यु झाडा पखाला (हैजालगायत) ले हुन्छ जसमध्ये अधिकांश बालबालिका छन् । यो मृत्यु अधिकांशतः विकासोन्मुख मुलुकमा हुने गरेको छ । डब्लूएचओले ८८ प्रतिशत झाडापखालाको कारण असुरक्षित पानी, अपर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छताको कमी रहेको जनाउँछ । डब्लूएचओकै तथ्यांकअनुसार सरसफाइमा सुधारले झाडापखाला (डाइरिया) ले हुने मृत्यु ३२ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । यस्तै खानेपानीको गुणस्तरमा सुधारले ६ देखि २५ प्रतिशतसम्म झाडा पखालाबाट हुने मृत्युदर कम गर्न सकिन्छ । स्वच्छ पानी, सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइ जस्ता स्वास्थ्य शिक्षाले ४५ प्रतिशतसम्म झाडापखालाका बिरामी कम गर्न सकिने डब्लूएचओले जनाउँदै आएको छ ।
स्रोत : कान्तिपुर दैनिक, ०६८ जेष्ठ ३, पेज न ४